Global Voices Radio SA Radio Global Voices · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Jona 2019 17:38 GMT
Endrika samihafa sy dika azo isafidianana ho an'ny famantarana ny GV Radio.
Arahaba ry namana! Jeremy , tale ara-teknika ihany ity. Satria efa tafapetraka sy mandeha ny onjampeon'ny vondrompiarahamonintsika ankehitriny, tokony hamarana ny anarany sy ny sary famantarana azy isika mba hahafahana mampiroborobo izany tsara. Niaraka niasa tamin'i Eddie Avila, talen'ny Rising Voices aho, izay niaraka tamin'ny ekipa iray nisahana ny tetikasa Onjampeo (Radio) GV, mba hamorona singa iray ho an'ny maso ho an'ireo safidina anarana roa fototra natolotray ireo, izay mitovy araka ny lazain'ny lohatenin'ity lahatsoratra ity.
Tato aminay, nantsoinay hoe ”GV Radio” ilay onjampeo, izay tsara sy fohy ary takatsika rehetra izany, nefa tsy tsara ho an'ny daholobe izay mety tsy mahafantatra hoe inona ilay “GV”. Ho an'ny famantarana fototra, te-hampiditra ny endritsoratra “GlobalVoices” izahay, izay manome anay safidina anarana roa mazava be: “Radio” aloha na aorian'ny hoe GlobalVoices.
Amiko, manana hevitra mahafinaritra somary “mahery” ny hoe “Global Voices Radio”, raha toa kosa ka tsotra sy natoraly kokoa ny hoe “Radio Global Voices”
Toy ny hitanao ao amin'ilay taratasy fiantsoana teo ambony teo, samy mandeha tsara avokoa ireo asakanto roa ireo, noho izany mba liana izahay raha toa ka misy manana hevitra amin'ny hoe iza amin'izy roa no tena mety.
Hatreto, nirona nitazona ny endrika tsotra miaraka amin'ny hoe “Global Voices Radio” aloha izahay, satria toy izany no niantsoanay azy hatramin'izao ary izany no endrika natoraly lava indrindra ho an'ny hoe “GV Radio” .
But inona no hevitrao? Valio ny fitsapankevitra eto ambany!
[gravityform id=”5″ title=”false” description=”false” action=”polls” style=”green” mode=”poll” show_results_link=”true” display_results=”true” percentages=”true” counts=”true”]
Mikasika ilay tilikambon'onjampeo
Sarikelina tilikambo GV Radio niainga avy amin'ny Tilikambon'Onjampeo nataon'i Rohith M S avy ao amin'ny Noun Project
Nosafidianay ny hampiasa tilikambo ho sarikely famantarana ny onjampeontsika izahay satria heverinay mahafehy tsara ny antom-pisiana sy ny ventin'ny fanelezana feo ao anatin'ny vanim-potoanan'ny Aterineto izany. Sasany tamin'ireo hevitra maro hafa noeritreretinay tamin'ireo asakanto ny mikrôfonina sy fitaovana fihainoana, izay zavatra natoraly misolo tena ny feo, saingy tsy dia manavaka loatra ny “onjampeo” sy ny podcast na karazam-peo hafa. Samihafa amin'ireo podcast, mandeha tsy tapaka ny onjampeontsika ary noho izany, manome vintana kokoa (mahita zavatra tsy fantatrao fa nirianao) noho ny fanarahamaso izay matetika andrasantsika amin'ny haino aman-jery maoderina. Ndeha isika hanantena fa hampita ilay vokatra (onjampeo) fa tsy hanalavitra loatra ny famantarana ny Global Voices efa misy ilay sarikely tilikambo famantarana ny onjampeo.
Niainga avy amin'ny Tilikambon'Onjampeo nataon'i Rohith M S avy ao amin'ny Noun Project ilay sarikely famantarana, izay ahitana sarikely famantarana marobe ampiasàna ny lisansa Creative Commons izay saika maneho ny zavatra rehetra ilainao. Nisafidy ity iray ity aho noho ireo tsipika tsotra sy matanjaka ananany (zava-dehibe ho an'ny dika kely amin'ilay sary famantarana) sy ny fidirany tsara ao amin'ny sary famantarana Adinkra antsika. Jereo ny mombamomba ilay sary famantarana mba hahitana ny habetsak'ireo sary famantarana hafa azo raisina manodidina ny sehatry ny “tilikambon'onjampeo”.
Lazao anay ny eritreritrao!
Manana olana amin'ity sary famantarana vaovao ho an'ny Global Voices Radio/Radio Global Voices ve? Safidina loko inona no tianao kokoa? Eritreretinao ho adala ve izahay? Mametraha hafatra 🙂